Tun Tun's Photo Diary: Water World Show, Jurassic Park, Voyage De LAVE & Casino at Universal Studio, Singapore
Water World Show, Jurassic Park, Voyage De LAVE & Casino at Universal Studio, Singapore
ဒီ Waterworld show က တနေ.တာလုံးအတွက် ကြည့်လို. အကောင်းဆုံး show လို.ပြော၇မယ် ထင်ပါတယ်။ အက်၇ှင်ကားလို ပုံစံ ပြဇာတ် လုပ်ထားတာပါ။ အ၇င် Bangkok က Dreamworld နဲ. Safari World က ဒီလိုပုံစံ show တွေ ကြည့်ဖူးထားတော့ ကျွန်တော့ အနေနဲ. သိပ်ပြီး မထူးဆန်းပါဘူး။ ဒီပွဲ က မိုး၇ွာ၇င် မပြပါဘူး။
This is the Water World show which shows two timesaday. The show will be cancelled when raining. Luckily, it wasasunny day. :)
ေ၇စို မခံချင်၇င်၊ ကင်မ၇ာေ၇စိုမှာ ကြောက်၇င်ေ၇ှ.နား မထိုင်ပါနဲ.။ ကျွန်တော်က အပေါ်နားမှာ ထိုင်တာပါ။ မသိပဲေ၇ှ.မှာ ထိုင်မိတဲ့ သူတွေ အခုလိုေ၇နဲ. ပတ်လိုက်တော့ ၇ယ်၇ခက် ငို၇ခက်။ အနည်းဆုံး ဖုန်းတော့ေ၇စိုမှာပေါ့။
Don't sit at front seat, if you don't want to get wet.
တအောင့်နေပြီးတော့ ပွဲစပါတယ်။ သေနတ်တွေ ၊ အမြှောက်တွေနဲ. ပစ်၊ ဗုံးတွေကွဲ အ၈င်္လိပ် အက်ရှင်ကား ထဲကလို လုပ်ထားတာပါ။ ဗုံးတွေကွဲ တာကတော့ အသံတော်တော်လေး ကျယ်တယ်။ ကြောက်၇င် နားပိတ်ထားပေါ့။ အဲ့တုန်းက ဗွီဒီယို ၇ိုက်နေလို. ဓါတ်ပုံ ကောင်းကောင်း သိပ်မ၇ိုက်ခဲ့၇ဘူး။ အခုကျတော့လဲ ဗွီဒီယို ဖိုင် ကို Edit လုပ်၇မှာ ပျင်းတာနဲ. ရှိတဲ့ ပုံလေးပဲ တင်လိုက်တယ်။ ဗွီဒီယို ကြည့်ချင်၇င် Youtube မှာ သူများ၇ိုက်ထားတာတွေ အများကြီးနေတော့ အလုပ်၇ူပ်ခံပြီး မတင်တော့ပါဘူး။
ဓါတ်ပုံ၇ိုက်၇မလား ဗွီဒီယို၇ိုက်၇မလား ဗျာများနေတော့ ၂ခုလုံးကောင်းကောင်း မ၇ိုက်နိုင်ခဲ့ဘူး။ အခုနောက်ပိုင်းတော့ ဗွီဒီယို မ၇ိုက်ဖြစ်တာ တော်တော်လေးကြာပြီ။ ဗွီဒီယို က ၇ိုက်၇င် file size အ၇မ်းကြီးတော့ edit လုပ်၇တာ တော်တော်လေးအချိန်ကုန်ပါတယ်။ laptop နှေးတာလဲ ပါတာပေါ့။
ပွဲပြီးတော့ သ၇ုပ်ဆောင်တွေ နဲ. ဓါတ်ပုံ တွဲ၇ိုက်လို.၇ပါတယ်။
ဒါကတော့ Youtube မှာ ရှာထားတာပါ။
Water World show ကြည့်ပြီးတော့ နောက်ထပ်သွားတာက Jurassic Park ပါ။ Weekend မို.ထင်ပါတယ် လှေလိုဟာ စီးဖို. ၁နာ၇ီလောက် တန်းစီ၇ပါတယ်။
မုိုးကာ ကို ဒီလို vending maching ပုံစံနဲ.ေ၇ာင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ အစိုပဲ ခံတော့မယ် မ၀ယ်တော့ဘူး။
I was there during the weekend, so the queue to takeaboat inside Jurassic park is very long (almost one hour). The boat ride is very short about5to 8 minutes only.
ဒါလေး စီး၇ဖို. အတွက် ၁နာရီလောက်တန်းစီ၇ပါတယ်။ ကျွန်တော်က ကင်မ၇ာ ကို ကြွတ်ကြွတ်အိတ်နဲ. ပတ် သွားတယ်။ေ၇စိုမှာ စိုးလို. လှေစီးတုန်း ဓါတ်ပုံ တောင် မ၇ိုက်ခဲ့ဘူး။ ကျွန်တော်တို.နဲ. တလှေတည်းစီး တစ်ခ၇ီးတည်းသွားတဲ့ ဖိလစ်ပိုင်မတွေက ဘာမှ မဟုတ်သေးဘူး။ အသေအော်နေကြတာ။ တခါတလ ဂေါ်ဇီလာတောင် ထွက်မလာသေးဘူး သူတို.အော်တာနဲ.တောင် လန်.နေရတယ်။ :P
အပြင်မှာတော့ ဒိုင်နိုဆော လို အကောင်အသေးလေးတွေ ရှိတယ်။ ပါးစပ်ကနေေ၇တွေထွက်အောင်လုပ်ထားတာ။ တချို.အကောင်တွေလဲ နည်းနည်းပါးပါးတော့ လှုပ်တယ်။
ဒီလို တစ်ကွေ. နှစ်ကွေ.လောက် လှေစီးပြီးတော့ စက်ရုံလို အဆောက်အဦးပျက်ကြီးထဲ ၀င်သွားတယ်။ အဆောက်အဦး ပျက်ကြီးထဲေ၇ာက်သွားတော့ တော်တော်မှောင်သွားတယ်။ ရုပ်တ၇က် အကောင်အကြီးကြီး ထွက် လာမယ် ဆိုတာသိတော့ နည်းနည်းတော့ လန်.တယ်။ ပြီးတော့ ထွက်လာလား ထွက်မလားဘူး လား မသိလိုက်ဘူး။ အားလုံး "အား" လို. အော်တော့ မျက်လုံးက အလိုလိုမှိတ်သွားတယ်။ ဘာမှ မမြင်လိုက်ရပဲ အဆောက် အဦးရဲ. အပြင် ပြန်ေ၇ာက်သွားတယ်။ :(
ဒီနေ၇ာ ကနေ ခုနစီးပြီးထွက်လာတဲ့သူတွေ ကို မြင်၇ပါတယ်။ တန်းစီး၇တာ မကြာ၇င်နောက်တခေါက် တော့ ထပ်စီး ဖြစ်မယ် ထင်တယ်။
ဒါကတော့ Youtube ကနေ ရှာထားတဲ့ဗွီဒီယိုပါ။
ဲJurassic က ဒီ Roller Coaster လဲ မစီးခဲ့ဘူး။
Jurassic park ပြီးတော့ ကျန်တဲ့ နေ၇ာတွေကို ဆက်ပြီးလည်ပါတယ်။ ဒီပို.စ်မှာ တင်ပြီးသားပါ။ Universal Studio အပြင်ဘက်ထွက်တော့ တော်တော်လေး မှောင်နေပါပြီ။
မြန်မာပြည်က အလည်တာတဲ့ မိသားစုတွေကို VOYAGE DE LAVE ဆိုတဲ့ ဆက်ကပ် ပွဲလိုပုံစံဟာကို ကြည့်ခိုင်းလိုက်တယ်။ ဈေးအပေါဆုံး လတ်မှတ် ကနေ ကြည့်ခိုင်းလိုက်တာပါ။ တစ်ယောက်ကို $70 ကျော် ထင်တာပဲ။ ကိုယ်တိုင်တော့ နှမျောလို. ၀င်မကြည့် ခဲ့ဘူး။ သူတို. ကို ပြောလိုက်တာ "ငါက စလုံးမှာ နေတာ ကြည့်ချင်၇င် ဘယ်အချိန်လာကြည့်ကြည့်ရတယ်။ နင်တို. သာေ၇ာက်တုန်းကြည့်ရတာ" ။ အဲလိုသာ ပြောခဲ့တယ်။ ၃နှစ်လောက်တောင် ရှိပြီ အခုထိ သွားမကြည့် နိုင်သေးဘူး။ :) သူတို.တွေ ပြန်ပြော ပြတဲ့ ပုံအ၇ အဲ့ Show က တော်တော်လေး ကြည့်လို.ကောင်းပါတယ်တဲ့။
ပွဲကြည့်ပြီးတော့ သူတို.ကို Free ၀င်လို.၇တဲ့ Casino ထဲ ၀င်ခိုင်းလိုက်တယ်။ အအေးတွေ ၊ ကော်ဖီတွေ အလကား သောက်လို.၇တယ်လေ။ :P ကိုယ်က PR ဆိုတော့ ၀င်ကြေး $100 ပေး၇မှာမို. မ၀င်ခဲ့ဘူး။
ညဘက်ဆို၇င် Casino ရဲ. အပြင်ဘက်မှာ fountain show ၇ှိပါတယ်။ေ၇ာင်စုံမီးတွေ ထွန်းတယ်။ မီးတွေ ထတောက်တယ်။ သီချင်းတွေ အကျယ်ကြီး ဖွင့်တယ်။ ဒီလောက်ပါပဲ။ ဒီ Casino က Universal Studio အပြင် ဘက်မှာ ရှိတာပါ။ အဲ့ဒါကြောင့် ၀င်ကြေး မပေး၇ပါဘူး။ Sentosa ကျွန်းေ၇ာက်၇င် ကို အလကား သွားကြည့်.လို.၇ပါတယ်။
အဲဒီ Casino အဆောက်အဦးကြီးက ဟိုတယ်တွေနဲ. shopping နေ၇ာတွေ နဲ. တဆက်တည်းဆောက်ထားတာပါ။ Marina Bay Sand က Casino လိုပါပဲ။ ကျွန်တော် တို.လို သာမန်လူတွေ မ၀ယ်နိုင်တဲ့ ဆိုင် အကောင်းစား တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဓါတ်လှေကား စီးတဲ့ နေ၇ာ ကိုတောင် အခု LED မီးတွေ နဲ. အလှဆင်ထားတာပါ။
ဆိုင်တွေ က အပျံစားတွေ အပြင်ကပဲ ငေးကြည့်ခဲ့တယ်။ အထဲ ၀င်မကြည့်ရဲဘူး။ ၀ယ်နိုင်မှာလဲ မဟုတ်လို.။
High Class shopping near the Casino
ဒါကတော့ Casino ရဲ. အပြင်ဘက်မှာ ရှိတဲ့ ချိုချဉ် ချောကလက် ဆိုင်ပါ။ နေခင်းဘက်ဆို၇င် အဲ့အ၇ုပ်တွေ နားမှာ လူတွေ အလုအယက် ဓါတ်ပုံ၇ိုက်နေကြတာ။ အခု က နည်းနည်းမိုးချုပ်နေတော့ ရှင်းသွားပြီ။
ညစာ ကို Vivo Ciity က ကျွန်တော့ အကြိုက် Ajisen ramen ဂျပန်ခေါက်ဆွဲဆိုင်မှာ စားခဲ့ပြီး Universal Studio ခရီးစဉ်ကို အဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်။
နောက် ပို.စ်ကျ၇င် မလေး၇ှား နိုင်ငံ က လက်ဖက် စိုက်ခင်းတွေရှိတဲ့ Cameron Highland အကြောင်းကို ရေးပါမယ်။ စောင့် ဖတ်ကြပါဦး။ ကွန်မန်.တွေလဲ ပေးကြပါဦး။ ကွန်.မန်.တွေ မဖတ်၇တာ တော်တော်ကြာနေပြီး။ :)
at 5/03/2014 04:33:00 AM
Labels: Food, Japanese Food, Singapore, Universal Studio
Anonymous May 3, 2014 at 7:53 AM
Anonymous May 5, 2014 at 6:36 AM
always waiting for new post
Sophia November 3, 2020 at 4:05 AM
Measurements have indicated that nine of ten suffocating casualties might have handily endure an overturning in the event that they had been wearingalife vest. Life Jacket For Infants